Maxaadan Ogeyn oo ku soo kordhay Weerarkii Jiliyaale Sh.Dhexe#Xogtii ugu danbeysay | Xaqiiqonews
Maxaadan Ogeyn oo ku soo kordhay Weerarkii Jiliyaale Sh.Dhexe#Xogtii ugu danbeysay
Xalay saqdii dhexe ayay ciidamo watay diyaarado dagaal iyo gaadiid gaashaaman waxay weerar ku qaadeen deegaanka Jilyaale oo dhaca halka ay iska galaan labada shabeelle balse maamul ahaan raacsan shabeellaha dhexe.
Sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah ciidamada Bangaraafta loo yaqaan ayaa ku degay tuulada Jilyaale waxayna weerar ku qaadeen Machad ay wax ku baranayeen carruurta Reer Barsame oo katirsan Beesha Gaaljecel.
Toogashada ay geysteen ciidamada huwanta ah waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 carruur ah iyo seddex kamid ah macallimiinta Machadka halka ay qafaasheen carruur kale oo wax ka baranayay Machadka.
Dad ku sugan Jiliyaale ayaa u sheegay xaqiiqonews in caruurta la watay ay dhanyihiin ilaa 40 caruur ah oo dhamaantood ka soo wada jeeda Beesha Barsane Gaaljecel.
Ma jirta ilaa Hadda Wax warar ah oo intaasi ka baxsan oo laga heli karo goobta waxaana caadi hadda ku soo laabtay xaaladda deegaanka iyadoo caruurtiina loo kaxeeyey Muqdisho.